Imodeli yase China: OG34RWA-165Hz mveliso kunye nabenzi | Umboniso ogqibeleleyo
Iimpawu ezibonakalayo ze-UHD zixhaswe ngokuqaqambileyo ngumgangatho wokuhlaziya we-165hz wokuqinisekisa ukuba ulandelelwano oluhamba ngokukhawuleza lubonakala luthe tyaba kwaye luneenkcukacha, zikunika umda ongezelelweyo xa udlala. Kwaye, ukuba unayo ikhadi yemizobo ehambelanayo ye-AMD, unokusebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-FreeSync yokubek 'esweni ukuphelisa iinyembezi kunye nokuthintitha xa udlala. Uyakwazi ukugcina kunye nayiphi na imarathons yokudlala ebusuku, njengoko ukubeka iliso kwimodi yesikrini ekunciphiseni ukukhutshwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwaye kunceda ukukhusela ukudinwa kwamehlo.
I-34 "VA yePhaneli eChongiweyo enesisombululo esingu-34400x1440 WQHD
Ixesha lokuphendula i-OD 8ms kunye ne-165Hz yokuHlaziya amaNqanaba
Ukujonga i-Angle: 178º / 178º (CR> 10)
Bonisa iPort kunye ne-HDMI
Akukho ukuthintitha okanye ukukrazula ngeTekhnoloji ye-G-Sync
Uyilo olungenasiphelo luzisa amava angcono
I-QHD sisishunqulelo sekota Inkcazo ePhakamileyo. Isisombululo se-QHD sifumana igama laso ngokunikezela amatyeli amane inkcazo ye-HD aka 720p esemgangathweni (1280 x 720). Izikrini ze-QHD zibukhali ngokucacileyo kune-HD epheleleyo (FHD) aka 1080p isisombululo (1920 x 1080), ezixhaphake kakhulu kwaye zitshiphu kuneziboniso ze-QHD.
Sithini isisombululo koku, unokuzibuza? Iqondo eliphezulu lokuhlaziya. Oku kuthetha ukuba unokuthenga i-100Hz, i-144Hz okanye i-monitor ye-165Hz. Ukuphucula ukusuka kwi-60Hz ukuya kwi-100Hz, i-144Hz okanye i-165Hz ngumahluko obonakalayo. Yinto ekufuneka uyibonile ngokwakho, kwaye ngekhe uyenze ngokujonga ividiyo yayo kumboniso we-60Hz.
Ireyithi yokuhlaziya eguqukayo, nangona kunjalo, itekhnoloji entsha yokusika eya isiba ngakumbi nangakumbi. I-NVIDIA ibiza le G-SYNC, ngelixa i-AMD iyibiza ngokuba yiFreeSync, kodwa owona mxholo uyafana. Umboniso nge-G-SYNC uyakucela ikhadi lemizobo ukuba lihambisa ngokukhawuleza kangakanani na izakhelo, kwaye alungelelanise inqanaba lokuhlaziya ngokufanelekileyo. Oku kuyakususa ukukrazula isikrini nakweyiphi na inqanaba lesakhelo ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu lokuhlaziya esweni. I-G-SYNC yitekhnoloji ethi i-NVIDIA ihlawulise umrhumo ophezulu welayisensi kwaye inokongeza amakhulu eedola kwixabiso lokubeka esweni. I-FreeSync kwelinye icala itekhnoloji yemithombo evulekileyo ebonelelwe yi-AMD, kwaye yongeza kuphela imali encinci kwiindleko zokubeka esweni. Umboniso oGqibeleleyo sifaka iFreeSync kuzo zonke iimonitha zethu zomdlalo njengomgangatho.
Ixesha lokuphendula ngokukhawuleza kunciphisa ukukhukhumeza kunye nokufiphaza ngelixa utshintsha iipikseli, uhlala ugcina utshaba kunye nomhlaba ngokuchanekileyo kugxilwe ngexesha lesiphithiphithi.
Egqithileyo Umzekelo: JM272QE-144Hz
Okulandelayo: Umzekelo: QM32DUI-60HZ
Ukubeka iliso kwi-Ips eyi-165hz
Imonitha egobileyo engama-34
I-intshi ye-intshi egobileyo yokuGada
34 intshi Monitor
I-intshi ezingama-34 Ultrawide 1440p
I-intshi ye-Wqhd engama-34
I-Wqhd egobileyo 3440 X 1440
umbhobho & pbp
wqhd 165hz iliso
Ukubeka iliso kwi-Wqhd